ဝေဖန်ခြင်း အပေါ်အတွေး။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » ဝေဖန်ခြင်း အပေါ်အတွေး။
Posted by ခင်ခ on Oct 23, 2012 in Society & Lifestyle | 12 comments
လူလောကမှာနေဖြစ်ကြတဲ့အခါ ကိစ္စရပ်တစ်ခု၊ အပြုအမှုတစ်ခု၊ လုပ်ဆောင်မှု့တစ်ခု စသည်အပေါ်တွေမှာ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေ ဝေဖန်ခံရမှု့ အပေါ်အတွေးလေးပေါ်လာလို့ ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ်တွေထဲက ပြန်ဖတ်ပြီးတော့ မျှဝေရေးမိတာပါ။
လူတွေက သူတို့အတွေးနဲ့ သူတို့ ချီးမွမ်းချင်တိုင်း ချီးမွမ်းမယ် …..ကဲ့ရဲ့ချင်တိုင်း ကဲ့ရဲ့ မယ် …..တစ်ခါတစ်လေ ချီးမွမ်းစရာ မဟုတ်တာကို ချီးမွမ်းတတ်တယ် ၊ ကဲ့ရဲ့စရာမဟုတ်တာကို ကဲရဲ့တတ်တယ် …အဲဒါတွေကြောင့် ကိုယ်ကလိုက်ပြီး စိတ်လှုပ် ရှားနေရင် ကိုယ်ဟာ တော်တော် စိတ်ဓါတ်မခိုင်မာတဲ့ သူ ဖြစ်နေမှာပေါ့။
ချီးမွမ်းတာ ကဲ့ရဲ့တာကို ဘယ်လိုမှ သဘောမထားဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေး ချမ်းချမ်းနဲ့ ကိုယ် လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကို ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း လုပ်နိုင်မှသာ စိတ်ဓာတ် ရင့်ကျက်သူလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ ဝေဖန်တိုင်း ကိုယ်က စိတ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင် သူတို့ နှိပ်စက်တာကို ကိုယ်က ခံနေရသလို ဖြစ်သွားမှာပေါ့လေ။ လူတွေကို လေးစားပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဝေဖန်တာတွေကိုတော့ သိပ်ဂရုမစိုက်ပါနဲ့။ ဘာလို့တုန်းဆိုတော့ လူတွေရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေဟာ တစ်ခါတရံ မှာ တဖက်သတ် ဖြစ်နေတာများတယ်။ တကယ် မှန်ကန်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့ ကြည့်ပြီး မျှမျှ တတ ဝေဖန်နိုင်တဲ့သူ တော့ရှိကြပေမယ့် အဲလိုမျှမျှတတ ဝေဖန်ပေးသူက အနည်းစုလောက်လို့ထင်ပြီး ဒီလောကမှာအင်မတန်ရှားတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်မသေးတဲ့သူဟာ သူများ ကိုယ့်ကို အထင်သေးတာကို ဂရုမစိုက်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်နေတဲ့ သူဟာ သူများ ဘာပြောပြောခံနိုင်တယ်။ သူတို့ တန်ဘိုးထားမှ ငါဟာ တန်ဘိုးရှိတဲ့သူ ဖြစ်မယ် ….အဲဒီလို ယူဆသလား ၊ အဲဒီလိုယူဆရင် ကိုယ့်တန်ဘိုးဟာ သူတို့လက်ထဲ ရောက်သွားပြီး ကိုယ့်ကို သူများက တန်ဘိုးဖြတ် ပေးနေပြီ။ ကိုယ့်ဂုဏ် သိက္ခာကို ထိခိုက်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်း ရှိတဲ့သူဟာ ဒီလောက မှာ တစ်ယောက်ထဲရှိ တယ်။ အဲဒါက ကိုယ်ပါပဲ ။
ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုတာ လွယ်တဲ့အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ခက်ပါတယ်။ သူနေရာမှာ စိတ်ခဏ စိတ်နစ်ခံစားပြီး၊
ပြီးတော့ … ဥာဏ်ရှိတဲ့သူမှလည်း လုပ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ချင်းမစာနိုင်ပဲ လွယ်လွယ် တဖက်သတ်စွတ်စွဲတဲ့သူဟာ ပျင်းတဲ့ သူတွေ ဥာဏ်နဲတဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။ “သူများက စေတနာမှန်မှန် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဝေဖန်တာကို ကိုယ်က စိတ်ညစ် သွားတယ် စိတ်ဆိုးသွားတယ် စိတ်ဓာတ်ကျသွားတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြောပါ…ငါ လုပ်ပုံလွဲနေတာကို ထောက်ပြ တာ ဝေဖန်တာ ငါမယူတတ်လို့ ငါ သဘောထားမမှန်လို့ ငါ စိတ်ဆင်းရဲရတာ” အဲဒီလို သဘောထားမျိုး ထားနိုင်ရမယ်။ဒါမှ ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ထား ရှိတယ်။ဒါမှ တိုးတက်မယ်၊ ဒါမှစိတ်ချမ်း သာမယ်။
စိတ်နေသဘောထား လေးနက်တဲ့သူ ရင့်ကျက်တဲ့သူ သဘောထားကြီးမားတဲ့သူဟာ သူများလုပ် တာ လွဲတာ မှားတာ မြင်ရတဲ့အခါ အဲဒီအလုပ်ကို လွဲကြောင်း မှားကြောင်း ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်း တဲ့အကြောင်းကို ပြောတယ် ။ စိတ်နေ သဘောထား မလေးနက်တဲ့သူ မရင့်ကျက်တဲ့သူ သဘောထားသေးတဲ့သူဟာ သူများလုပ် တာ လွဲမှားတာကို မြင်ရတဲ့အခါ အဲဒီအလုပ်ကိုဝေဖန်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ မပြောပဲ လုပ်တဲ့သူ မကောင်းကြောင်း ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဦးတည်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှုံ့ ချတဲ့ စကားမျိုး ပြောတတ်တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ ဝေဖန်တာ ရက်စက်ချင်တဲ့ စေတနာပါတယ်။ သူများကို ဘယ်လိုလူစားလို့ ပြောတာဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုလူစားလို့ ဖေါ်ပြနေတာနဲ့တူနေ တယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိလက် လွတ်ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်က သူများကို အပြစ်တင်နေတာ ရှုံ့ချနေတာဟာ သူ ဘယ်လိုလူစားဆိုတာ တကယ် တော့ သိပ်မပေါ်လွင် ဘူး ။ ငါ ဘယ်လိုလူဆိုတာတော့ သေသေချာချာ ပေါ်လွင်သွားပြီ။ သူ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျအောင် ငါပြော မယ်ဆိုရင် သူ့ကိုမပြောခင်မှာ ငါက အရင်ဆုံး ဂုဏ်သိက္ခာ ကျသွားပြီ။ သူများအပြစ်ကို များများရှာပြီး ပြောနေတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကို ကိုယ်ချတာပဲ။ သူများ ကို ဂုဏ်သိက္ခာချပြီးမှ ကိုယ့်ဂုဏ်ကို တင်လို့ရမယ့် ဘ၀ကို ရောက် နေ ရပြီ။ ငါသူများကို အများကြီး ဂုဏ်သိက္ခာချတဲ့ စကားတွေ ပြောရင် သူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကျသွားလိမ့်မယ် မထင် နဲ့နော်။ သူ ဂုဏ် သိက္ခာ ကျဖို့ မသေချာဘူး။ ကိုယ့် ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဖိုတော့ သေချာသွားပြီ။ ငါ့ဘ၀ဟာ သူများကို အပြစ်တင်နေရ မှဖြစ်မယ့် ဘ၀ ရောက်နေပြီလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးပါ။ သူများ သူယုတ်မာ ဖြစ်မှ ကိုယ် သူတော်ကောင်း ဖြစ်မှာလား ???
သူများ အပြစ်ကို များများတွေးလေ ကိုယ့်ဘ၀ မတိုးတက်လေပဲ။ မနာလိုစိတ်နဲ့ သူများအကြောင်း များများတွေး သူများ အပြစ်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေရင် ကိုယ် လုပ်သင့်တာကို ကိုယ် မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ သူတစ်ပါးကို မုန်းတီးနေ တဲ့သူ အပြစ် တင်နေတဲ့သူဟာ အောင်မြင်တဲ့သူ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဘ၀ဟာ အင်မတန် တိုတောင်းပါတယ်။သူများ မကောင်းကြောင်းတွေ ထိုင်တွေးနေဖို့ အချိန်မရှိပါ ဘူး။ သူတစ်ပါးမှာ အမှားတစ်ခုခု ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခုများ တွေ့တဲ့အခါ ကိုယ့်မျက်နှာကို မှန်ထဲ ကြည့် နေသလို သဘောထားပါ။ သူတစ်ပါးကို အပြစ်မြင်လို့ရှိရင် အဲဒီ အပြစ်မျိုး ကိုယ့်မှာ ရှာကြည့်ပါ။ ရှိနေတတ်တာပဲ များပါတယ်။ သူတစ်ပါးမှာ ကောင်းတာ မြင်ရင်လည်း အဲဒီ လိုကောင်းတာ ငါ့မှာကော မရှိဘူးလား? ရှိရင်ကောင်း ပါတယ်။ ကောင်းသည်ထက် ကောင်းအောင် ကြိုးစား ရမယ်။မရှိသေးရင် ရှိလာအောင် ကြိုးစားရမယ်။ သူများအကြောင်းကို အကောင်းတွေးပါ။သူများအကြောင်း အကောင်းတွေးလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကြောင်း ကိုပါ အကောင်းတွေးပြီးသား ဖြစ်သွား ပါတယ်။ သူများမှာရှိနေတဲ့ ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကို ကိုယ်က တန်ဖိုးမထားနိုင်ရင် အသိအမှတ်မပြုနိုင်ရင် အဲဒီ့ ဂုဏ်မျိုး အဲဒီ့ အရည်အချင်းမျိုး ကိုယ့်မှာ မရနိုင်တော့ဘူး။ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ပိတ်လိုက်တာပဲ။ ကိုယ့်မှာ ကောင်းတဲ့ဂုဏ် ကောင်းတဲ့ အရည် အချင်း တွေ များများလိုချင်ရင် သူများရဲ့ ကောင်းတဲ့ ဂုဏ် ကောင်းတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို များများမြင်အောင် ကြည့်ပြီး တော့ စိတ်ထဲက လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ရိုးရိုးသားသား အသိအမှတ်ပြုပါ။ ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ချီးမွမ်းပါ ။
အဲဒါ…အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲ။အောင်မြင်ချင်တယ်၊ကြီးပွားချင်တယ်ဆိုရင် သူတစ်ပါးရဲ့ ကောင်းတဲ့ ဂုဏ်လေး တွေကို ကြည့်ပါ။အသိအမှတ်ပြုပါ။ မြင့်မြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ဂုဏ်ကို အာရုံပြုတာများရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မြင့်မြတ်တဲ့သူ ဖြစ်ချင် လာတယ်။ သာမန်အားဖြင့် — စဉ်းစားရင်တော့ ငါ့ကို ဘယ်သူမှ မကောင်း မပြောရင် ကောင်းမှာပဲလို့ ယူဆမှာပဲနော်။ အမှန်ကတော့ အဲဒီလို ယူဆတာ မကောင်းဘူး။ငါ့ကိုဘယ်သူမှမကောင်း မပြော ရင် ငါဟာ ရင့်ကျက် လာတဲ့သူ ဖြစ်မလာ နိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ကို ချီးမွမ်းနေတဲ့ကြားမှာ ပြုံးပြုံးလေးနေရတာ ဘာမှ အခက်အခဲမရှိဘူး။အဲဒါ ရင့်ကျက်မှု မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကို အကောင်းပြောတဲ့အခါလည်း ရှိတယ်။ အဆိုး ပြောတဲ့ အခါလည်း ရှိတယ်။ ချီးမွမ်းခြင်း ၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း ဆိုတာ လောက ဓမ္မတာပါပဲ ။ အထိုက်အလျောက် ခံနိုင်ရည် ရှိကိုရှိမှ ဖြစ်မယ်။ လုံးဝ အပြောမခံနိုင်ရင် လောကကြီးမှာ နေလို့ မဖြစ်ဘူး ။
ဆရာတော် ဦးဇောတိက (မဟာမြိုင်တောရ)၏ တွေးမိတိုင်း ပျော်တယ် စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ် ဖော်ပြ မျှဝေရေး လိုက်မိတာပါဗျာ။
အဲဒါ…အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲ။အောင်မြင်ချင်တယ်၊ကြီးပွားချင်တယ်ဆိုရင် သူတစ်ပါးရဲ့ ကောင်းတဲ့ ဂုဏ်လေး တွေကို ကြည့်ပါ။အသိအမှတ်ပြုပါ။ မြင့်မြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ဂုဏ်ကို အာရုံပြုတာများရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မြင့်မြတ်တဲ့သူ ဖြစ်ချင် လာတယ်။
ဆ၇ာတော့်ဆုံးမ စကား တ၇ားတွေကို…
အခုလို.. ကိုခင်ခ ပြန်လည် တင်ပြပေးတော့လည်း..
ဖတ်ရင်း..ကျေနပ် ပီတိ ဖြစ်မိပြန်တယ် ။
ပထမဆူုံး. မန့် တဲ့ လူကို..ဘာလက်ဆောင်ပေးမလဲ…
ဆိုတဲ့ အလင်းဆက်ရေ ဦးဆုံးကွန့်မန့်အတွက် ကျေးဇူးတင်သလို ခုတောင်ခေါ်ရရင် ဘီယာမပြောနဲ့ အမြည်းပါကျွေးချင်ပါတယ်။ နောက်များဆုံဖြစ်ခဲ့ရင် သတိပေးဗျာ အခုတော့ ခဏမှတ်ထားအုံးပေါ့။
ဝေဖန်ခံရတာ မှန်ကြည့် ရသလိုဘဲ လို့ယူဆထားပါတယ်
မှန်တောင်မှကြည့် ရဲသေးရင် ဝေဖန်တာလည်း ခံနိင်ရမှာပေါ့  ။
ဒီလိုဘဲ ကျိုးစားပြီး ကိုယ့် ကိုကိုယ်မြင်အောင်ကြည့် သင့် တာပေါ့ ဗျာ နော
လူဆိုတာ (လူစစ်စစ် တွေကိုပြောတာ ) ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပဲ သိတာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာလဲ၊ ဘာကောင်လဲ ၊ ဘယ်လို စိတ်ဓာတ်မျိုးလဲ ဆိုတာ ဘုရားသခင်သိတယ် ဆိုတာထက် ကိုယ်တိုင်က ပိုသိတာ လူ ပဲရှိသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ် ဘယ်သူလဲ၊ ဘာလဲ ၊ ဘယ်လဲ …..တစ်ချက်လောက် အမြဲတွေး။
ကိုယ်သိသလို သိစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ တင်ပေးလို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ထင်ပါတယ် ..ဥပက္ခာတရားဆိုတာလေးလည်း .. သူ့နေရာနဲ့သူရှိသင့်တယ်လို့ ပြောကြတာကိုး …….
စိတ်နေသဘောထား လေးနက်တဲ့သူ ရင့်ကျက်တဲ့သူ သဘောထားကြီးမားတဲ့သူဟာ သူများလုပ် တာ လွဲတာ မှားတာ မြင်ရတဲ့အခါ အဲဒီအလုပ်ကို လွဲကြောင်း မှားကြောင်း ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်း တဲ့အကြောင်းကို ပြောတယ် ။ စိတ်နေ သဘောထား မလေးနက်တဲ့သူ မရင့်ကျက်တဲ့သူ သဘောထားသေးတဲ့သူဟာ သူများလုပ် တာ လွဲမှားတာကို မြင်ရတဲ့အခါ အဲဒီအလုပ်ကိုဝေဖန်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ မပြောပဲ လုပ်တဲ့သူ မကောင်းကြောင်း ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဦးတည်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှုံ့ ချတဲ့ စကားမျိုး ပြောတတ်တယ်။
သူများကို ဘယ်လိုလူစားလို့ ပြောတာဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုလူစားလို့ ဖေါ်ပြနေတာနဲ့တူနေ တယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိလက် လွတ်ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်
ကူးသွားပါတယ် … share ခွင့်ပြုပါ …